Fanovana nomerika sy ny maha-zava-dehibe ny fampidirana vina stratejika | Martech Zone
Fanovana nomerika sy ny maha-zava-dehibe ny fampidirana vina stratejika
Talata, Febroary 16, 2021 Talata, Febroary 16, 2021 Carter Hallett
Ny iray amin'ireo volafotsy vitsivitsy amin'ny krizy COVID-19 ho an'ny orinasa dia ny fanafainganana ny fanovana nomerika, niainana tamin'ny taona 2020 tamin'ny 65% ​​n'ny orinasa araka ny Gartner. Efa nandroso haingana izany satria ny orinasa manerantany dia naneho ny fomba fihevitr'izy ireo.
Noho ny areti-mifindra dia mitazona olona maro hisoroka ny fifandraisana mivantana amin'ny fivarotana sy birao, ny fikambanana amin'ny karazany rehetra dia mamaly ny mpanjifa manana serivisy nomerika mety kokoa. Ohatra, ireo mpivarotra ambongadiny sy ireo orinasa B2B izay tsy mba nanana fomba hivarotana vokatra mivantana akory dia niasa ora bebe kokoa hanodinana ireo fahaiza-manao e-varotra vaovao, raha toa kosa ka miaraka am-pelatanan'ny mpiasa miasa any an-trano voalohany. Vokatr'izany dia nirongatra ny fampiasam-bola amin'ny haitao vaovao hifanaraka amin'ny andrasan'ny mpanjifa.
Nefa maika hampiasa vola amin'ny haitao satria fotsiny izany ny zavatra hatao Mahalana ny drafitra asa tsara. Orinasa maro no mividy haitao lafo vidy, amin'ny fiheverana fa azo ampifanarahana mora foana izy io aorian'izay mba hifanaraka amin'ny maodelim-pandraharahana manokana, ny mpihaino kendrena ary ny tanjon'ny mpanjifa, hany ka diso fanantenana eny an-dalana.
Tsy maintsy misy drafitra. Saingy ao anatin'ity tontolon'ny asa ity izay tsy azo antoka, tsy maintsy maika ihany koa. Ahoana no ahafahan'ny fikambanana iray manatanteraka ny roa?
Ny iray amin'ireo fiheverana lehibe indrindra, rehefa mandeha amin'ny dizitaly tanteraka ny orinasa iray, dia ny fampidirana ny vina stratejika matanjaka manerana ny IT sy ny marketing miaraka am-pijerena ny fahamatorana nomerika amin'ny ankapobeny. Raha tsy misy azy io dia iharan'ny risika ny orinasa fa mihena ny vokatra, ny teknolojia misoloky ny silamo ary ny tanjon'ny orinasa tsy tratra. Saingy misy ny fiheveran-diso fa ny hoe stratejika dia midika hoe mampiadana ny fizotrany. Tsy izany no izy. Na dia eo am-pamitana ny asany aza ny orinasa dia mbola tsy tara ny fanitsiana mifanaraka amin'ny tanjona lehibe.
Ny maha-zava-dehibe ny fitsapana-sy-ianarana
Ny fomba tsara indrindra hampifangaroana ny vina stratejika amin'ny fanovana nomerika dia amin'ny fisainana fitsapana sy fianarana. Matetika ny fahitana dia miainga avy amin'ny fitarihana ary mitohy fisainana maromaro izay azo hamarinina amin'ny alàlan'ny fampahavitrihana. Manomboha kely, manandrama amin'ny subet, mianatra tsy miovaova, manangana momentum, ary amin'ny farany mahatratra ny tanjon'ny orinasa sy ny tanjona ara-bola lehibe kokoa. Mety hisy fihemorana vetivety eny an-dàlana - fa miaraka amin'ny fomba fitsapana sy fianarana dia lasa mianatra ny tsy fahombiazana ary hiaina hetsika mandroso hatrany ny fikambanana.
Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hiantohana ny fanovana nomerika mahomby sy ara-potoana miaraka amina fototra stratejika matanjaka:
Mametraha fanantenana mazava amin'ny fitarihana. Toy ny zavatra maro dia maro, ny fanohanana avy any ambony dia manakiana. Ampio ireo tompon'andraikitra ambony hahatakatra fa ny hafainganam-pandeha tsy misy paikady dia tsy mahomby. Ny fomba fitsapana-sy-fianarana dia hahatonga ny fikambanana hanana tanjona farany tadiaviny ao anatin'ny fotoana fohy indrindra ary hanohy hanamafy ny fahitany amin'ny ankapobeny.
Ampiasao amin'ny teknolojia fanohanana sahaza. Anisan'ny fizotry ny fanovana nomerika mahomby ny fananana dingana fanangonana sy fitantanana data, fitaovana ahafahana manao fitiliana sy manokana, ary analytics sy fahiratan-tsaina. Ny martech stack dia tokony hojerena amin'ny ankapobeny mba hahazoana antoka fa mifandray sy miasa miaraka tsara ny rafitra. Ny olana momba ny fahadiovana data sy ny fizotran'ny boky amin'ny tanana dia fandrika mahazatra manelingelina ny fiovan'ny dizitaly. Ny rafitra koa dia tokony ho azo ovaina sy miovaova mba hiasa amin'ny teknolojia vao nampiana satria miova ny orinasa. Mba hahatratrarana izany, ny mpiara-miasa amin'i R2i miaraka amin'i Adobe ho toy ny fanoloran'izy ireo vahaolana dia natao hifamenoana sy ireo haitao hafa kilasy tsara indrindra ao anatin'ny ekosistema martech, mampifandray ireo angona avy amina loharano marobe amin'ny sehatra afovoany.
Aza totofana loatra ny fizotrany. Ampidiro rehefa mandeha ny fotoana. Fikambanana maro no mijoro voalohany amin'ny teknolojia nomerika ananany, midika izany fa betsaka ny zavatra ianarana indray mandeha. Fahendrena ny manafika ny famatsiam-bola amin'ny ampahany kely kokoa isaky ny dingana, mahafehy ny rafitra rehefa mandeha. Ary koa, fikambanana maro no iharan'ny fanerena ara-bola mavesatra, izay midika hoe manao bebe kokoa amin'ny olona vitsy kokoa. Amin'ity tontolo ity, ny fampiasam-bola mialoha dia azo inoana fa hifantoka amin'ny mandeha ho azy mba hahafahan'ny mpiasa misy mifantoka amin'ny laharam-pahamehana. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny tondrozotra teknolojia, ny orinasa dia hahomby indrindra amin'ny fanatratrarana ny tanjona midadasika kokoa.
Manolora tena amin'ny fanaovana tatitra isam-bolana na telo volana. Raha te hiasa ny fizotrany dia tsy maintsy misy ny mangarahara momba ny zavatra ianarana sy ny fiantraikan'izany amin'ny drafitra ankapobeny. Mametraha tanjona amin'ny fihaonana amin'ny mpitarika orinasa sy ny ekipa manan-danja isam-bolana na telo volana, mba hanomezana vaovao farany, fianarana ary tolo-kevitra momba ny fanitsiana ny drafitra. Mba hahazoana antoka fa fampiharana mahomby dia mety ho marani-tsaina ny fitazonana ny mpiara-miasa nomerika. Raha nanaporofo na inona na inona ny COVID-19 dia tsy azo tanterahina intsony ny paikady mavesatra satria rehefa misy tranga tsy ampoizina tonga dia mila mahay mitsara haingana izay tsy tokony hiatoana sy izay tokony hiova ny fikambanana. Ny mpiara-miasa amin'ny fahaizana amin'ny teknolojia sy ny tetika dia manana fahatakarana lalina ny fomba ifandraisan'izy roa. Izy ireo dia afaka manampy amin'ny famolavolana drafitra marobe izay mbola hahomby sy hahasoa mandritra ny telo volana, enim-bolana, iray taona, na telo taona aza manomboka izao.
Nandritra izay taona lasa izay dia niova izao tontolo izao - ary tsy noho ny virus corona fotsiny. Ny fanantenana ho an'ny traikefa niomerika dia nivoatra, ary ny mpanjifa dia manantena ny ambaratonga mitovy amin'ny fanamorana sy fanohanana, na mividy ba kiraro na kamio simenitra izy ireo. Na inona na inona sokajy orinasa, orinasa dia mila mihoatra ny tranokala; mila mahafantatra ny fomba fanangonana angon-drakitra momba ny tsena izy ireo, ny fomba fampifandraisana ireo angona ireo, ary ny fomba fampiasana ireo fifandraisana ireo mba hanomezana traikefa manokana an'ny mpanjifa.
Amin'ity fanenjehana ity, ny hafainganam-pandeha sy ny tetika dia tsy tanjona iraisana. Ireo orinasa izay manome ny marina azy dia ireo izay tsy vitan'ny hoe misaina sy mianatra ny eritreritra fa koa matoky ireo mpiara-miasa aminy anatiny sy ivelany. Ny ekipa dia tokony hanaja ny fitarihany, ary ny mpanatanteraka dia mila manome fanohanana sahaza. Ny taona lasa dia fanamby no milaza ny kely indrindra - fa raha miara-mivondrona ireo fikambanana dia hivoaka amin'ny dian'ny fanovana nomerika matanjaka sy marani-tsaina ary mifandray bebe kokoa amin'ny mpanjifany izy ireo noho ny teo aloha.
Tags: AdobeautomatiqueCovid-19fidiovana dataFanovàna dizitalyfampidiranaLeadershipstack martechtatitrafahitana stratejikatetikateknolojiaandramo ary mianara
Carter Hallett dia tetikady tetikady marketing nomerika miaraka amin'ny masoivoho nomerika nasionaly R2 natambatra. Carter dia mitondra traikefa 14+ taona sy ambangovangony tsara amin'ny fanaraha-maso ny paikadim-barotra nentim-paharazana sy nomerika. Miara-miasa amin'ny mpanjifa B2B sy B2C izy mba hamolavola fototra stratejika lalina, hamaha ny fanambin'ny orinasany, ary hamorona fifandraisana lalina sy misy dikany, mifantoka amin'ny famoronana tantara an-tsary, traikefa amin'ny mpanjifa 360 degre, famokarana fangatahana ary valiny azo refesina.
Pirinty natao: Fanontam-pirinty amin'ny fangatahana sy fanaovana amboradara
CrankWheel: Fandaharam-potoana sy fisintomana amin'ny alàlan'ny demôksy miorina amin'ny browser